UK Kathy Whitworth: I-Biography kunye neNkcukacha zoLuntu
UChrist Whitworth uzuze ezinye iintetho kwiLPGA Tour kunanoma yintoni enye i-golfer kwimbali yokutyelela. Akukho mdlali we-PGA Tour owake waphumelela ngaphezu kwe-Whitworth, nokuba.
Ingxelo kaKathy Whitworth
Umhla wokuzalwa: Sept. 27, 1939
Indawo yokuzalwa: Monahans, eTexas
I-LPGA Ukunyuswa koKhenketho: 88
I-LPGA Championship: 1967, 1971, 1975
IWest Open: 1967
Abanikazi bamatyala: 1965, 1966
Ixesha eli-8 le-LPGA yeenkokeli zetyelelo (1965-68, 1970-73)
Ixesha eli-7 le-LPGA Vare Trophy (ukulinganisa) ukuphumelela (1965-67, 1969-72)
I-LPGA yexesha eli-7 Umdlali wonyaka ophumeleleyo (1966-69, 1971-73)
I-Associated Press Athlete kaNyaka, 1965, 1967
Wasebenzisa emithathu imiqathango njengomongameli we-LPGA
I-Captain, iqela le-US Solheim Cup, ngo-1990, ngo-1992
Uhloniphekile kuJack Nicklaus 'Memorial Tournament, ngo-2002
Ilungu, iHlabathi lezemidlalo yeHlabathi yeHlabathi yoLwazi
UKathy Whitworth: "Kukho ilizwi elidala, lithi, 'Umyili osihlwempu obeka amatyala akhe.' Ngokuqhelekileyo ngumdlali olahlekelwa ezo zintathu, hhayi i-putter. "
UKathy Whitworth: "Igalofu, ngaphezu kweyona midlalo, inamanani amaninzi, ngokuqhelekileyo iguqulwe ngokuphumelelayo njengeengcebiso. Lumka!"
UChrist Whitworth: "Akukho mntu ulandele igorfu."
Xa uKathy Whitworth ephelile ngowesithathu kwi- US US Women's Open , waba ngumdlali wokuqala weLPGA ukudlula imali eyi-1 yezigidi kwi-career.
I-Whitworth ithathe ubuncinane umqhubi omnye ngonyaka ukususela ngo-1962 ukuya ku-1978, i-streak ye-17 iminyaka. Yiyona ndlela ende kunazo zonke kwi-LPGA.
Biography kaKathy Whitworth
UK Kathy Whitworth uzuze i-tournaments ezingama-88 kwi-LPGA Tour, ngaphezu kweyiphi enye i-golfer (kwaye ngaphezu kwayo nayiphi na i-golfer inqobile kwi- PGA Tour ).
Ngexesha le-9 leminyaka ukususela ngo-1965 ukuya ngowe-1973, iWitworth yafumana izihloko zemali ezisibhozo, izihloko ezi-7 zokubeka amanqaku kwaye kwathiwa ngeLPGA Player of the Year amaxesha asixhenxe.
UWhitworth wazalelwa eM Monahans, eTexas, kodwa ubuninzi bakhe buntwaneni basebenzisa iNew Mexico. Waqala ukudlala i-golf ngasekupheleni, eneminyaka eyi-15 ubudala, kodwa ngo-1957, unyaka wokuphumelela esikolweni sakhe esiphakeme, wayephumelele iNew Mexico State Amateur. Wabuyisa umqhubi omnye kwakhona ngo-1958.
Waya esikolweni kwiklasi e-Odessa, eTexas, ngaphambi kokuba atshintshe ngo-1958. Kwathatha iminyaka emine eWentworth ukuba athole i-LPGA yokuqala (1962, Kelly Open Open), kodwa ekufikeni kwayo, uhambo luka-Whitworth lwaqhuma.
Wawunqoba ubuncinane umqhubi omnye ngonyaka ukususela ngo-1962 ukuya ku-1978, ngamaxesha amaninzi amakhulu kwi-mix: iinqununu ezisibhozo ngo-1965, ezithoba ngo-1966, ezisibhozo ngo-1967 no-10 ngo-1968.
Ixesha elidlulileyo lokugqibela lalingu-1984 xa ephumelele kathathu, kwaye ukunqoba kwakhe kokugqibela kwafika ngo-1985 iUnited Virginia Bank Classic.
Endleleni, iW Whitworth yayikhonze izigaba ezintathu njengoMongameli weBhodi eliLawulayo le-LPGA, apho ancedisa ukuma umgaqo-nkqubo kwaye akhankanya ukukhula kweLPGA Tour.
I-Whitworth yayingumqhubi obalaseleyo kunye nomgca ophezulu. Into ekhoyo engekho kwimisebenzi yakhe yi-US Women's Open Open. Ngaphandle kweemali zakhe zokugcina iifayile, iWotworth yazuza "kuphela" ama-6 angama-majors - kodwa loo nto iyonke yaxhaswa yinto yokuba ukususela ngo-1968-71 no-1973-78, bekukho kuphela amabini aphakamileyo ngonyaka odlalwa kwiLPGA Tour.
I-greats eyayingaphambi kwe-Whitworth idlala ii-3 okanye ezine-majors iminyaka emininzi, kwaye abaninzi balabo bamlandela babedlala ezine ngonyaka.
U-Whitworth waqhubeka edlala kwiziganeko eziphezulu emva kokuba umsebenzi wakhe weLPGA Tour waphela, kwaye waba ngumfundisi ohlonishwa kakhulu kumdlalo. Ufumene i-US kwiNdebe yeSolheim yokuvulwa.
Zingaphi Izinto ezilahlekileyo ezilahlekileyo Ngaba i-Tiger Woods ine-PGA Tour?
UTommy Bolt: I-Golfer 'Golror' Eye yafikelela kwiHolo yoLwazi
Blair O'Neal Igalari yezithombe
Iifayile ezigqibeleleyo zama-80s kwiimvumi
I-Romanticism kunye neZendalo kwi-Ligeia yase-Edgar Allan Poe
Iingcamango Zengqondo ezingenanto
Ngubani Wabhala "Olu Khanyiso Oluthile Lwam"?
Iimpuphu kwi-Sharks neRays
Izikhokelo Zokufunda zamahhala
Yonke Into Okufuneka Uyazi Ngamazinga Amandla eMculo
Ukutya ukutya kungenza i-DUI Breathalyzer Test Test
I-Yeshiva University Admissions